အောင်ပွဲ ခံနေကြပြီဟေ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » အောင်ပွဲ ခံနေကြပြီဟေ့
Posted by ဂျစ်စူ on Apr 1, 2012 in 2010/2012/2015 Election | 41 comments
ဒီအောက်ကပုံတွေကတော့ ကိုအောင်မျိုးလွင်ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်က လို့ ပြောပါတယ်..
ကျနော်က ဧရာဝတီက ယူလာတာပါဗျာ။
ဒီအောက်ကပုံတွေက AP ကပါဗျို့ 
ကလိန်ကကျစ်၊ညစ်နည်းပေါင်းစုံနဲ့အမှန်ခြစ်လို့ မရအောင် ဖယောင်းသုတ်ထားတာတွေ၊
မိသားစုစာရင်းဖျောင်ထားတာတွ၊မဲပေးလို့ မရအောင် အမျိုးမျိုး နှောင့်ယှက် လုပ်ကြံထားသမျှတွေအတွက်
နောက်ဆုံးတော့ အပြတ်သတ်ပဲ ရှုံးခဲ့ကြပါပကောလားဗျို့ ။
သောက်မယ်..အဲ..အဲ..များကြီးသောက်ရင် မိန်းမဆူမှာစိုးလို့ ..အာစွတ်လျှာစွတ် တစ်ဂွပ်..နှစ်ဂွပ်ပဲ
တစ်ဂွပ်ဆိုတာ ဘယ်လိုတစ်ဂွပ်လဲတော့ လာမမေးနဲ့ ..ကွိ..ကွိ..
ခင်ဗျားတို့ လဲ ဘာလုပ်နေကြသတုန်း
ထ.က ကြပါတော့လား..လို့ 
(စည်းကမ်းရှိရှိ အောင်ပွဲခံကြပါစို့ နော့)
အပေါ်ကဟာကတော့ ပို့စ်အသစ်ကလေးမှာ ဒီမိုကရေစီဆန်ဆန်
သက်ဆိုင်ရာဒေသခံတွေရဲ့ မိမိတို့နိုင်မဲများကို ဒေသအလိုက်
အဲ့သည်အကြောင်းက မသမာတဲ့ ကြိုတင်မဲတွေကို ကာကွယ်ခြင်းတစ်နည်းလို့လည်း
အထူးသဖြင့် ပါဝင်ဆင်နွှဲကြတဲ့ သူတွေအားလုံးကို မိမိတို့ကျရာနေရာမှ
တိုင်းပြည်တွက် အလုပ်လုပ်သူများလို့ မှတ်ယူပါတယ်
လောလောဆယ်တော့ ကိုယ်နိုင်တယ်ဘဲ မှတ်ယူနှင့်ကြပါဦးခင်ဗျ
မနက်ဖြန် ဟိုငနွားတွေက တယ်လီဘေးချင်းထဲဂနေ
ဟို အင်္ကျီအကျား အတွင်းခံဘောင်းဘီလက်ရှည် ဝတ်ထားတဲ့
သူတို့ ကိုကြည့်ပြီး မပျော်ဘူးလားဗျ
ဗိုက်ကလေး .. သြဇီ ဆိတ်သားဟင်း လှမ်းတောင်းလိုက်လေ..
အခုဆို ကဘုန်းကျော် တောင်စောင်းမှာ ဆိတ် လိုက်ဖမ်းနေလောက်ပြီ..
ဘာလဲကွ .. ဒါပဲကွ …
အဟေး .. ဟေးးးးးးးးး
နိုင်ပြီကွ … နိုင်ပြီ … (အပြတ်အသတ်ပဲ)
ခုတော့ ဘာတတ်နိုင်သေးကြလဲကွ …
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်ယုတ်ပါစေ ..
နောက်ဆုံးတော့လည်း ဒို့ခွပ်ဒေါင်း ပဲလေ …………
♫ .. ပျော်တယ်ဟေ့ .. ♫ .. ♪ .. ပျော်တယ် .. ♫ .. ♪ .. ဒို့ NLD နိုင်လို့ပေါ့ကွယ် .. ♫ .. ♪ ..
နိုင် ငံ ခြား သား တွေ က မှန် တယ် ဆို ရင် အား ပေး ကြ တာ ဘဲ ။ အား တက် စ ရာ ကြီး ။
အူဒွန်ကြီး အားတက်လို့ဆိုပြီး ကြာဇံတွေ မြူစွမ်တွေ ဆေးရောင်စုံချယ်ပြီးကဲလိုက်ပါလား …
အခွင့်အရေး ရတုန်း အကြောင်းပြ ကောင်းတုန်း ဆိုးထားလိုက်နော် :grin:
ပုလင်းတောင် ဖင်ကပ်ရောက်နေပေါ့ အေ့..
♫ .. ပျော်တယ်ဟေ့ .. ♫ .. ♪ .. ပျော်တယ် .. ♫ .. ♪ .. ဒို့ NLD နိုင်လို့ပေါ့ကွယ် .. ♫ .
ချဗျာ ကို အံစာတုံး.. ခင်ဗျား အလှည့်
တို့ လဲ Black Label တစ်လုံးဝယ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အောင်ပွဲခံ နေပြီးဗြို့။ မနက်ဖြန်တော့ MC ပဲဗျို့။ ဟိ ဟိ…………….Cheer !!!!!!!!!!!!!!!!!
ပျော်စရာကြီးဟေ့ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ တစ်နေ့လုံး သတင်းစောင့်ကြည့်ရတာ …အဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့ေ၇ာက်တော့ ပိုတောင်ပျော်ဘို့ကောင်းသေးတယ်……ချီးယားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ဗိုလ်ကြောင်ကြီးတဲ့ဟေ့… ဒိုင်းညှောင့်.. ဒက်ကလုပ် ဒက်ကလုပ် ဒက်ကလုပ်…
I was cried when saw the news at Eleven FB,
တပ်မ ၁၀၁ မဲရုံတွင် NLD ၆၇၀ မဲ၊ ကြံဖွတ် ၃၀ မဲ
ခလရ ၂၅၉ မဲရုံတွင် NLD ၂၆၉ မဲ၊ ကြံဖွတ် ၂၃ မဲ
most of the comments for that news showing the missing love between Military and Civilians.
One day… not too far.. to reunite….
ပုံလေးတွေ ကိုကြည့်ပြီး အဲဒီထဲမှာ ဝင်နွှဲချင်လိုက်တာ။
အမှန်တရား ကို မြင်နိုင်ကြပါစေ သက်ဆိုင်သူ အာဏာရှင်များ ရှင့်။
မောင်ဗိုက် – တကယ်ဘဲ မိန်းမရနေတာလား ဟယ်။ ;-)
မနေ့ညကသွားတာ ဘယ်လိုမှတိုးမရဘူး။ အားလုံးပျော်နေကြတာ။ သိတဲ့သူကော မသိတဲ့သူကော နှုတ်ဆက်ကြ သတင်းပေးကြ နဲ့ မျက်နှာမှာပျော်နေတဲ့အပျော်တွေက ၂၂ နှစ်ကြာ မှပြန်တွေ့ရတယ် အရီးလတ်ရယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ ၂၂ နှစ်စောင့်ခဲ့ရ တယ်။ မြန်မာတွေတော်တော် ဇွဲကောင်းတာပဲနော်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
အားရစရာကြီးပါလား ၊ ဒီမှာစောင့်မနေပဲနဲ့ ထွက်ပြီး ကချင်လာပြီဝေ့ ၊
ကိုဗိုက်ကြီး .. အဲ .. ကိုဗိုက်ကလေး ကကြရအောင်ဝေ့ ၊
တူနယ် တဲ့နယ် ဗြောင်
ဗေပုံ ပတ်ပုံ ပတ်ပုံ ပတ်ပုံ ဂျိ ။
နိုင်မယ်မှန်း သိလို့ မနေ့ကတဲက သောက်ထားတာ။ မနေ့က နဲနဲများသွားလို့ အခုထက်ထိ မသောက်ရသေး ဘူး။ မနေ့က သောက်ထားတာကိုဘဲ ဖြေနေရတယ်။ ဆိတ်သားဟင်း လေးရရင်ထည့်ပေးခဲ့ကြအုံး။ အမြည်း က ကြံ့ဖွတ်နဲ့ မြည်းနေရတာ သိပ်မကောင်းဘူး။
အူဗိုက်…..နိုင်ဘီနော်ဒို့ဒွေနိုင်ဘီ….. မမူးသေးဘူး…. ကျွန်ဒေါ်မူးသေးဘူး….. အောင်ပွဲခံတာဒီလောက်နဲ့
တော့မူးလို့ဖြစ်ဘူး….ဂေ့….အေ့….. တကယ်မူးနေပါ၏ မနေ့ညကအိပ်ရေးပျက်ခံကာစောင့်ကြည့်နေရသော
ကြောင့်မူးနေပါ၏…. ကျွန်တော်ကအားလုံးထက်ကြိုအောင်ပွဲခံပြီးသားပါဗျ……. အောင်ပွဲခံဖို့စောင့်ရင်းစောင့်
ပုံတွေကြည့်ပြီး ကြက်သီးတောင်ထမိပါရဲ့။ အောက်ဆုံးက ပုံကတော်တော် good တယ်။
အင် ဒုက္ခပါပဲအောက်ဆုံးပုံမဟုတ်ဘူးတော့။ connection ကမကောင်းဘူး။ အောက်ဆုံးရဲ့အပေါ်ကပုံ။
ပျော်လွန်းလို. ဘာမှမပြောတတ်တော.ဘူး ……။
ပြည်သူတွေရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ထာဝရရှိနေတာက အမေစုပါ…စစ်မှန်တဲ့ ပြည်သူ့ ဆန္ဒကိုသာ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင် ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ထာဝရအနိုင်ရရှိနေမှာမလွှဲ၊မသွေပါပဲခင်ဗျာ….
ယခုအချိန်ဟာ ကျနော်တို့အတွက် အလုံးစုံပျော်ရွှင်ခွင့်တွေရရှိသွားတာမဟုတ်သေးပါဘူး ၊ပထမခြေလှမ်းအတွက် အောင်မြင်မူပဲရှိပါသေးတယ် ၊နောက်ထပ်ကြိုးစားရအုံးမယ် ခြေလှမ်းတွေအများကြီးကျန်ပါသေးတယ် ၊နေပြည်တော်မှာ (၅)နေရာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တာ (၄)နေရာအနိုင်ရတယ်လို့သိရပါတယ်၊အထူးခြားဆုံးအောင်မြင်မူလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်၊ ယခုရရှိတဲ့ အောင်မြင်မူတွေကို ဂရုစိုက်ပြီးထိမ်းသိမ်းသွားဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီအောင်မြင်မူအပေါ်မှာသာယာနေလို့မပြီးသေးပါဘူး၊
ယခုအနိုင်ရသွားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးအတွက် ငါတို့ကို ပြည်သူတွေကတာဝန်တွေပေးလိုက်ပြီ၊ အဲဒီတာဝန်တွေကိုပြီးဆုံးအောင်ဆောင်ရွက်ရပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ အသိ အမြဲရှိနေရပါမည်။
ကို zaw min ရေ
” နေပြည်တော်မှာ (၅)နေရာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တာ ၊ (၄)နေရာအနိုင်ရတယ်လို့သိရပါတယ် ”
သဂျီး အိပ်မက်နဲ့ကွက်တိပဲဗျို့ 
တရားမျှတမှုကို နေရာဒေသ လူမျိုး ဘာသာ မခွဲခြားပဲ
လူတိုင်းက ချစ်တယ် ဆိုတာ သက်သေပါပဲ ။
နှစ်ထပ် ရှိမှ မှတ်မိ မှာလား ၊ သုံးထပ် ရှိသွားအောင် ၂၀၁၅ မှာလဲ လာမယ် ။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်မဟုတ်ပဲ မုဒိတာပွား ပျော်နေကြသူများကို လေးစားမိပါတယ်။
လူသားချင်း စာနာထောက်ထားတတ်တဲ့ စိတ်စေနတာတွေရဲ့ ပြယုဂ်တွေပါပဲ။
မနက်မိုးလင်းလို့ အွန်လိုင်းပေါ်မတက်ခင်ကတည်းက အမေစုအကြောင်းတွေကားပေါ်မှာပြောနေ ကြတယ်..NLD ကဘယ်လိုနိုင်တာတွေ…ဖယောင်းတွေနဲ့ အကျင့်ယုတ်တာတွေ..မဲရုံရှေ့မှာထိုင်စောင့်နေကြတာတွေ..အိုး အစုံပါပဲဗျာ
အေး ကြားလိုက်မိတယ်ဆိုတိုင်း ကြက်သီးတွေထပြီးအတိုင်းမသိပျော်ရွှင်မိတာကတော့ အမှန်ပါပဲ
အခုလဲ ဓါတ်ပုံတွေတွေ့ပြီး ပြောမပြတတ်အောင် ကြည်နူးဝမ်းသာဖြစ်မိတယ်ဗျာ…..
ညက အောင်ပွဲခံလိုက်တာ နဲနဲများတွားလို့ခုမှ ထနိုင်တယ်
ဆိတ်သားဟင်းကျွေးမယ်ဆိုတဲ့ ကပုတ်ကျော်ကို ပြုတ်စားကြရအောင်ဗျို့ 
တစ်ကယ်လဲနိုင်ကော ဘယ်ချောင်သွားပုန်းနေလဲ မသိဘူး
အင်း စည်းကမ်းရှိရှိအောင်ပွဲခံလိုက်တယ် အိမ်မှာမိသားစုခြောက်ယောက်
ငါးကင်သုံးကောင်ဝယ် akon ရဲ့ Freedom သီချင်းအကျယ်ဂျီးနဲ့ မြည်းပီး အောင်ပွဲခံပစ်လိုက် တယ် …
ဒီ post နဲ့ comment တွေမြင်ရကြည့်ရတာ ပိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျ
ညက ရုံးချုပ်ရှေ့ကနေ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ အထိ နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်တွင် ယှဉ်ပြိုင်နေသော အဆိုတော် ဇေယျာသော် သတင်းမကြားသေးလို့ အားလုံး စိတ်ပူပြီး စောင့်နေကြတာ တွေ့တယ်။
ဒီမနက်မှ ဂျာနယ် အမြန်ဝယ်ပြီး သတင်းစောင့်ဖတ်လိုက်မှ နိုင်သွားပြီ ကိုး လုပ်ရတော့တယ်။
ဟေ့ကောင် ကြံ့ကြီး မင်းပြောတော့ ဖယောင်းသေချာသုတ်ထားတယ်ဆို။
ငါလည်း လုပ်တာဘဲဖွတ်ကြီးရာ၊ မင်းလုပ်တဲ့ ဖျောက်ထားတဲ့မဲနဲ့ ကြိုတင်မဲကရော မဟန်ပါလားကွာ။
ပျော်တယ် ဆိုတဲ့စကားထက် ပိုပြီးပျော်တယ်…
သတ္တိရှိတဲ့ ရေရှည်ကြည့်တဲ့ ပြည်သူတွေ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေ တပ်မတော်သားတွေကိုလဲ စိတ်ထဲက အကြိမ်ကြိမ်ချီးကျူးနေမိတယ်…
ကျုပ်ကတော့ အယ်ကိုဟောနဲ့မတည့်လို့ တညအတွင်း ဘလက်ကော်ဖီသုံးခွက်သောက်ပြီး အောင်ပွဲခံပစ်တာ အခုထိ မအိပ်ချင်သေးဘူး..
အော်.. ဘလက်ဆိုလို့ ကိုဘလက်ချောကြီးသတိရလိုက်တာ..။
နောက်ဆုံးတော့ အောင်မြင်မှုကို ရရှိလာခဲ့ကြပြီပေါ့။ သွေးနဲ့ ချွေးနဲ့ ရင်းသွားကြတဲ့သူတွေလည်း တမလွန်ကနေ ၀မ်းသာကြည့်နဲ့ ကြည့်နေကြမယ်လို့ မြင်မိတယ်။
တကယ်ကိုပျော်စရာနေ့လေးပါ 1.4.12ကိုဘယ်တော့မှာမမေ့ပါဘူး မနေ့ကတနေ့လုံးအွန်လိုင်းကနေ သူငယ်ချင်းတွေကိုမေးနေရတယ် ရင်တွေလည်းတကယ်ကိုတုန်နေရပါတယ် ည7နာရီလောက်မှသိရတယ် ကျမအလုပ်ကအပြင်နဲ့လည်း သိပ်အဆက်သွယ်မရတော့မေးရတာလည်း ခက်တယ်လေ ညအလုပ်လည်းပြန်ရော လမ်းမှာအော်ပြီးပျော်နေလိုက်ကျတာ အမေစုကျန်းမာပါစေ NLDနိုင်သွားပြီ အဲလိုကို ကားတွေလိုက်အော်နေ တာ တကယ်ကိုပျော်စရာနေ့လေးပါဘဲ
တကယ်ကိုပျော်စရာနေ့လေးပါ 1.4.12ကိုဘယ်တော့မှာမမေ့ပါဘူး မနေ့ကတနေ့လုံးအွန်လိုင်းကနေ သူငယ်ချင်းတွေကိုမေးနေရတယ် ရင်တွေလည်းတကယ်ကိုတုန်နေရပါတယ် ည7နာရီလောက်မှသိရတယ် ကျမအလုပ်ကအပြင်နဲ့လည်း သိပ်အဆက်သွယ်မရတော့မေးရတာလည်း ခက်တယ်လေ ညအလုပ်လည်းပြန်ရော လမ်းမှာအော်ပြီးပျော်နေလိုက်ကျတာ အမေစုကျန်းမာပါစေ NLDနိုင်သွားပြီ အဲလိုကို ကားတွေလိုက်အော်နေ တာ တကယ်ကိုပျော်စရာနေ့လေးပါဘဲ လူတွေတော်တော်လေးကိုပျော်နေကျတယ် နော် အမေစုလည်း ဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကို တာဝန်ယူနိုင်သလို ကျွန်မတို့လည်း အမေစုနောက်မှာ အမြဲရှိနေပါတယ် အားကိုးပါတယ် အမေစုရယ်